Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ Hogwarts Icons Collectors 'Edition ယခုထွက်သည်
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76391 Hogwarts Icons Collectors 'Edition ကိုယခုရနိုင်သည်
02 / 09 / 2021 02 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 262 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, ပါမောက္ခ Dumbledore, ပါမောက္ခ McGonagall, Rubeus Hagrid, စျေးဝယ်
Wands (နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်) အဆင်သင့်ရှိသည်။ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု မှာမှာရန်ယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com.
Hedwig ၏အသက်အရွယ်အပန်းဖြေခြင်းဖြင့် Harry's wand, မျက်မှန်များ၊ ဆေးရည်များ၊ စာလုံးပေါင်းစာအုပ်များနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အုတ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောမှော်ပစ္စည်းများသည် Potterhead ၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ ဒီ set ကိုပထမဆုံးကြေငြာကတည်းကအသက်တစ်ခုလိုခံစားရပေမယ့်အခုနောက်ဆုံးမှာ ၀ ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ LEGO.com နှင့် Lego Stores ။
အမေရိကန်ပရိသတ်များသည်လောလောဆယ်တွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည် ပို့ဆောင်ရေးနှောင့်နှေး တွန်းခဲ့သည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှုမြောက်အမေရိက၌စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်၌စတင်ဖြန့်ချိသည်။ ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသည်တူညီသောပြသနာအားဂရုဏာမထားဘဲ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၊ ဗြိတိန်၊ ဥရောပနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ယခုချက်ချင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
သေတ္တာထဲတွင်မှော်အရာဝတ္ထုများနှင့်အတူမင်းပါမောက္ခ Dumbledore နှင့် McGonagall နှင့် Rubeus Hagrid တို့အပါအ ၀ င်သင်၏နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်စုဆောင်းခြင်းကိုအပြီးသတ်ရန်ရွှေသီးသန့် minifigures သုံးခုကိုလည်းတွေ့လိမ့်မည်။ ရွှေကိုးလုံးကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ ဟယ်ရီပေါ်တာ minifigures မှ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
ငါတို့စီရင်ချက်ချပြီးပြီ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှုစာသားပုံစံဖြင့်သင်တွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ ဦး တည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကြောင်းသို့အပေါ်မှကလစ်ဖြင့်ကစားခြင်းကို နှိပ်၍ ဗွီဒီယိုပုံစံဖြင့်ကြည့်ပါ ယူကျု့ချန်နယ်) ့။ အတိုချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လုံးလုံးလျားလျားလွဲမှားနေသည်။
သင်မှာယူနိုင်ပါတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု မှ LEGO.com ယခု£ 229.99 / $ 249.99 / € 249.99 ထိုအလုပ်ကိုထောက်ခံရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ငါတို့အသုံးပြု တွဲဖက်လင့်ခ်များ - ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ဗိုလ်ကြီး Carter
Lego Ideas A-Team ပုံစံသည် 10K ကိုအက်ကွဲစေ။ လက်တွေ့ဖြစ်လာနိုင်သည် →